tanora mpandraharaha – Blaogin'i Voniary
Étiquette : tanora mpandraharaha
Voahosotra ho mpandraharaha tanora mendrika indrindra eto Afrika i RANDRIARIMANANA Tahina tamin’ny 25 Oktobra 2016 lasa teo. Mirehareha tokoa isika Malagasy manana azy manandratra avo ny firenentsika. Tsy tokony avelanao handalo fotsiny anefa ny fandresena toy ireny fa tokony hisintonanao lesona mba hoentinao eo amin’ny fiainanao koa. Nofintiniko ao anatin’ireto teboka dimy ireto ny tsara... Lire la Suite →
Isaky ny alakamisy fahatelon’ny volana dia miantso mpandraharaha iray ny « Le Centre d’Excellence en Entrepreneuriat » ao amin’ny ISCAM mba hifampizara traikefa amin’ny mpanatrika. Tao anatin’izany indrindra no nitondran’i Fano RAZAFIMAMONJIRAIBE, mpiara-managana sy tale jeneralin’ny TORIO Creatives, ny lohahevitra hoe : « ny fahasarotan’ny fananganana orinasa ». Marihina moa fa tamin’ny teny gasy ny fifanakalozan-kevitra. Voniary: Mba lazao fohifohy... Lire la Suite →